यसकारण रोजें स्वेच्छिक अवकाश :: नवराज न्यौपाने 'मौन' :: Setopati
नवराज न्यौपाने 'मौन'
सानो छँदा प्राय: सबै मानिसले मलाई भन्ने गर्थे- बाबु! तिमी त डाक्टर, इन्जिनियर बन्नुपर्छ है।
म पनि गर्वका साथ भन्ने गर्थें- म ठूलो भएर इन्जिनियरिङ पढ्ने छु।
यसरी ममा इन्जिनियरिङ विषय पढ्ने रहरले डेरा जमाएको थियो।
एक कक्षादेखि दस कक्षासम्म पढ्दा कहिल्यै दोस्रो हुनु परेन।
विद्यालय तहमा सात पटक सर्वप्रथम भएको म एसएलसी परीक्षामा भने तनहुँ जिल्लामा तेस्रो हुन पुगेको थिएँ।
अनि वि.सं २०४४ साल साउनमा म इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान,पश्चिमाञ्चाल क्याम्पस, लामाचौर पोखरामा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा तहमा भर्ना हुन पुगें।
उक्त क्याम्पसका पहिलो ब्याचका विद्यार्थी हामीहरू राजनीतिमा कम र पढाइमा बढी ध्यान दिने गर्‍थ्यौं।
पोखरामा घर भएकाबाहेक अरू सबै विद्यार्थीहरू छात्राबासमा बसेर पढ्थ्यौं।
हरेक दिन चार घण्टा सैद्धान्तिक कक्षा र छ घण्टा प्रयोगात्मक कक्षा हुन्थ्यो। प्रयोगात्मक कक्षा प्रयोगशाला, कार्यशाला र क्याम्पस हाता परिसरमा हुन्थ्यो। छात्राबासको समय पनि लेखपढ र नक्सांकन कार्यमै बित्थ्यो। कहिलेकाहीँ शनिबार र बिदाको दिन पनि प्रयोगात्मक कक्षामा सरिक हुने गरिन्थ्यो।
त्यो बेला नेपालमा कम्प्युटर र डिजिटल प्रविधि भित्रिसकेको थिएन।
भर्नियर स्केल भएका उपकरण प्रयोग गर्नुपर्थ्यो भने ग्राफ पेपरमा हातैले नक्सा बनाउनु पर्थ्यो।
पढाइमा कम्प्युटर कोर्स नै समावेश थिएन। मानिसको दिमागले गर्ने काम सबै गर्नुपर्थ्यो। सबै जना लेखेपढमा व्यस्त र अभ्यस्त हुने गरिन्थ्यो।
तीन वर्षमा सकिनुपर्ने हाम्रो पाठ्यक्रम जनआन्दोलन २०४६ र भारतीय नाकाबन्दीका कारण झन्डै चार वर्ष लागेको थियो।
२०४७ चैतमा पढाइ सकियो र एक महिना नबित्दै नतिजा पनि आयो। त्यसपछि म जागिरको खोजीमा काठमाडौं आएँ।
२०४८ साल साउनमा मैले भूकम्प पीडित क्षेत्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजनामा स्थायी जागिर पाउन सफल भएँ।
मेरो दरबन्दी ललितपुर जिल्लामा भयो।
२०४५ सालमा सुरू भएको आयोजना आफ्नो लक्ष्य पूरा भएपछि स्वत: बन्द हुने निश्चित थियो।
तर पनि हामी निश्चिन्त भएर भूकम्पले भत्केका घर तथा विद्यालय निर्माण गर्ने काममा दत्तचित्त भएर खटिएका थियौं।
भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण गर्न सिमेन्ट र फलामे छड पनि प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। । त्यतिखेर गाउँघरमा छडको प्रयोग नौलो मानिन्थ्यो।
निर्माण कार्यको क्रममा हामी २५ कोस टाढा रहेको ठूलादुर्लुङ गाविससम्म घुमी घुमी निर्माण कार्यको अवलोकन गर्ने र निर्देशन दिने गर्थ्यौं।
विद्यालय परिवार र गाउँले जनसमुदायले हामीलाई आदर र सत्कार गर्ने गर्थे। देशको सेवा गर्न पाएकोमा मलाई गौरवको अनुभूति हुन्थ्यो।
वि.सं २०५० वैशाखमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा प्राविधिक मागको विज्ञापन खुल्यो। मैले पनि परीक्षा दिएँ।
तर नाम निकाल्न सकिएन। २०५० मंसिरमा पुन: विज्ञापन खुल्यो।
यसपटकको परीक्षामा भने म नाम निकाल्न सफल भएँ।
अनि भूकम्प अफिसमा राजीनामा दिएर मैले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको सब इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्ति लिएर २०५० साल पुस महिनामा मनाङ जिल्ला हान्निएँ।
जिल्लामा हाम्रो कार्यालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा हुन्थ्यो। दुक्षेविसका योजनाहरू २२ दुर्गम जिल्लाका दुर्गम स्थानहरूमा राखिएको हुन्थ्यो।
विकाससँग सम्बन्धित अन्य कार्यालयहरूले कार्यक्रम नराखेका विकट स्थानमा योजना सञ्चालन गर्नको लागि साइट इन्चार्ज भएर बस्नु पर्थ्यो। घोडेटो बाटो, झोलुङ्गे पुल, लघु जलविद्युत, सोलार आदि योजनाहरू सञ्चालन गर्न योजनास्थलमा डेरा जमाएर बस्न पर्थ्यो।
हामीलाई बाह्रै महिना व्यस्तताले गाँजिरहेको हुन्थ्यो। दुक्षेविसका योजना लगयात उक्त क्षेत्रमा गाविस, जिविस र केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सारा योजनाको सर्भे, डिजाइन, लागत इष्टिमेटादेखि लिएर योजना कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण कार्यमा तल्लीन भएर दिन बिताउनु पर्दा आफ्नो घर परिवारको बारेमा सोच्ने फुर्सद कहिल्यै मिल्दैनथ्यो।
फेरि सबै काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने हुँदा प्राविधिकको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो।
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा रहेर मनाङ, मुस्ताङ, कालीकोट, गोरखा, धादिङ, सङ्खुवासभा र रसुवा जिल्लाहरूमा भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्ने काममा निकै दु:ख कष्ट झेल्नुपर्‍यो।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पनि हाम्रा योजनाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहे।
योजना सञ्चालनको समयमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू मलाई लिन र पुर्‍याउन आउँथे।
यसरी एक्काइस वर्ष गुमनाम भएर दुर्गम गाउँबस्तीमा बिताएको थिएँ। योजनास्थलबाट फर्कंदा र जिल्लाबाट सरूवा हुँदा गलाभरि खादा र अनुहारभरि अविर लिएर बिदाबारी हुनुपर्थ्यो।
यी एक्काइस वर्षमा मैले आर्जेको सम्पत्ति भनेको गाउँले जनसमुदायको माया र सद्भाव नै हो।
सोह्र वर्ष सब इन्जिनियरको भूमिका निर्वाह गरेपछि मात्र इन्जिनियरमा बढुवा हुन सफल भएँ।
अहिले सम्झँदा पनि मलाई नोष्टाल्जिक बनाइरहन्छ।
वि.सं २०७१ साउनबाट मेरो केन्द्रमा सरूवा भयो।
केन्द्र (श्रीमहल, पुल्चोक) मा सरूवा भए पनि काम पर्दा जिल्लामा गइरहनु पर्थ्यो। तर अधिकांश समय भने कार्यालयमा नै बित्ने गर्थ्यो।
जिल्लामा बिताएका ती कहालीलाग्दा दिनहरु सम्झेर केन्द्रमा बस्दा केही राहत मिलेझैं हुन्थ्यो।
म केन्द्रमा आएपछि छोराछोरी पनि काठमाडौं पढ्न आउने भए। छोरी एसइई उत्तीर्ण गरेर र छोरा सात कक्षा उत्तीर्ण गरेर काठमाडौं आएँ।
छोरी मोर्गन कलेजमा विज्ञान विषयमा १२ कक्षामा भर्ना भइन् भने छोरा सिद्धार्थ बनस्थली इन्स्टिच्युटमा आठ कक्षामा भर्ना भयो।
उनीहरूको अभिभावक बनेर मैले आफ्नो जागिरलाई पनि निरन्तरता दिइरहें। तर संघीयता लागू भएका कारण २०७५ सालबाट दुर्गम क्षेत्र विकास समिति विघटन भयो।
दुक्षेविसका कर्मचारीहरूलाई दुर्गम जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिकाहरूमा समायोजन गरियो।
दुर्गम जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिका रोज्ने विकल्प पनि दिइएको थियो। तर स्वास्थ्य र घरायसी दुवै कारणले गर्दा मैले पुन: दुर्गम भेगमा नजाने निर्णय गरें र स्वेच्छिक अवकाश लिएर बसें।
अनि साहित्य लेखन र पत्रकारिता क्षेत्रमा समय खर्चिने निर्णय गरेर छोराछोरीसँग नै बसिरहेको छु।
अहिले छोराछोरी पनि ठूला भइसकेका छन्। छोरीले अर्किड कलेज गौशालाबाट बिएस्सी सिएसआइटी उत्तीर्ण गरी एउटा निजी संस्थामा सिनियर सफ्टवयर इन्जिनियरको रूपमा काम गरिरहेकी छन् भने छोराले ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा बिई दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेको छ।
म भने उनीहरूको अभिभावक बनेर बचेको समय लेखन कार्यमा लगाइरहेको छु। जीवन रहे जगत देखिने रहेछ,भावना र सम्झना भए कहानी लेखिने रहेछ। र, यसरी नै हरेक दिन अनुभूतिको सिँढी टेकिरहेछ। अस्तु!
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ८, २०७८, ०५:५०:००